'ABASANDUL' UKUTSHATA UNYAKA WOKUQALA 'IXESHA LESI-3, ISIQENDU 6 UKUPHINDAPHINDA:' UKUPHELA KWEBALI '- IINDABA ZEKNOT - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato 'Abasandul' ukutshata Unyaka Wokuqala 'Ixesha lesi-3, Isiqendu 6 Ukuphindaphinda: Ukuphela kweBali
UCraig Ramsay kunye noBrandon Liberati baphikisana ngobuhlobo bukaCraig noCristal kubantu abasandul 'ukutshata: Unyaka wokuqala. Ityala: iBravo
Ngu: Kelly Spears 02/04/2016 ngo-11: 47 AM
Iiholide zimalunga nosapho, uxolelo, kunye nedosi esempilweni yedrama, kunye Abasanda kutshata: Unyaka wokuqala izibini zifumana konke oku kungasentla.
Isiqendu se-3 kaFebruwari, esinesihloko esithi Yiyo Yonke iGravy, singqine ukuba ukulalanisa kunokuba yinto nje eyimfihlo kumtshato owonwabileyo, owonelisayo. Ngelishwa, ayizizo zonke Abantu abasandul 'ukutshata ube nengqondo evulekileyo. Ukuba ufuna ukuvuselelwa, hlala ubukele izinto eziphambili. Inkqubo ye- Abantu abasandul 'ukutshata ungaze udanise!
UBrandon Liberati kunye noCraig Ramsay: Ukulandela ukungcola kovavanyo lwesidoda ekhaya kwisiqendu se-27 kaJanuwari, uCraig wenza idinga nogqirha wakhe. Kusemthethweni; isidoda sam sikhutshiwe, i Abantu abasandul 'ukutshata izabelo nababukeli. Kwaye emva kokuqala amayeza okuchuma, uyawubona umahluko kumzimba wakhe omdaka. Nangona efuna ukuba nabantwana bakhe bendalo, iziphumo ebezingalindelekanga ziyinto exhalabisayo. Ndifuna ukugcina umzimba wam omncinci kunye nolwalamano lwam, uCraig uyavuma. Singamadoda amabini. Amadoda acinga ngesondo, kwaye ndifuna ukumgcina ecinga ngesondo. Kodwa uBrandon uyamqinisekisa ukuba akazukukhathalela nokuba unesisu.
Emva kwexesha, uBrandon uhambisa indlu yakhe ukucoca amandla amabi. Umhlobo kaCraig osenyongweni uCristal uza kundwendwela, kwaye uCraig unethemba lokuba umyeni wakhe kunye nebestie baya kudibana. Ungathanda ukuba uCristal abe ngumama womntwana wabo, kodwa uBrandon akaqinisekanga. Ndiza kuziva ngathi ndishiyiwe, uBrandon uxelela uCraig ngexesha elisemngciphekweni, kwaye andizukuziva ngaloo ndlela nabantwana bam. UCraig akaqinisekanga ukuba umyeni wakhe makahlale evulekile engqondweni. Ndicinge ixesha elide kwaye kunzima ngayo yonke le meko, utshilo uBrandon ngokuqinisekileyo. Andonwabanga. Umyeni wakho akakhululekanga. Ewe, ke khululeka, uCraig uphendula kabukhali, kuba uCristal yimpendulo. Ukuphela kwebali.
UCraig uyavuya njengoko Abantu abasandul 'ukutshata ukuqhuba ukuya kwisikhululo seenqwelomoya ukuya kulanda uCristal kunye nentombi yakhe. Ndinomyeni wam, utshilo uCraig, kwaye ngoku ndinomfazi wam ozayo. UBrandon unezothe kukhetho lomyeni wakhe lwamagama.
Kuyandoyikisa ukuhlala noCristal kunye nentombi yakhe, izabelo zikaBrandon. UCraig ugalela iiglasi ezimbini zewayini, eshiya umyeni wakhe ngaphandle. Ndicinga ukuba uCraig ngumntwana, uBrandon uxelela ababukeli, kwaye ufumana umbono wetonela, kwaye andicingi ukuba ucinga ngenye into engaphambi kwakhe. Ngomzuzu ongonwabisiyo, uBrandon umema uCristal ekuqeshweni kwesikhonkwane ngosuku olulandelayo.
Njengokuba behleli kwi-salon yesikhonkwane, uBrandon wabelana noCristal ukuba wothukile uCraig wabavumela bobabini ukuba baphume bodwa. Andinakuba nosapho apho ndilivili lesithathu, uBrandon uyavuma ngokuphandle emva kokuchaza imeko yabo ezisa imicimbi kuye. Kodwa uCristal uyakhawuleza ukumqinisekisa ukuba yena noCraig bafana nje nabantakwabo.
Inye into andiyifuniyo kukuba semtshatweni nodade-umfazi, UBrandon uxelela uCristal, omqinisekisa ukuba ayizonjongo zakhe. Kwaye ngelixa benazo ii-pedicure kunye, bobabini babonakala ngathi benza iqhina. Nabani na ozimisele ukusinceda ukuba nosapho lwethu ngumntu omangalisayo, uBrandon uxelela uCristal. Ithetha lukhulu ngohlobo lomntu onguye. Yiyo yonke into endifuna ukuyazi. Ababukeli bayibona inkqubela ezayo Abantu abasandul 'ukutshata + inye.
Njengokuhamba kukaCristal, izabelo zikaBrandon, ngoku ndiziva ngathi sonke sinesiqalo esitsha. Xa ifayile ye- Abantu abasandul 'ukutshata Ukuthetha, uBrandon uxelela umyeni wakhe ukuba uziva ekhululekile kwaye ekhuselekile kwaye ethembele ekubeni no [Cristal] njengomama webhayoloji. UCraig uyavuya. Ndonwabile xa ubona uCristal ngendlela endihlala ndimbona ngayo, uxelela umyeni wakhe. Sinethemba elingaphezulu kancinane lokuba abantwana baseCraig naseBrandon kungekudala.
UAdonis noErica Gladney: Inkqubo ye- Abantu abasandul 'ukutshata ncokola malunga noMbulelo, kwaye uAdonis ufuna ukumema utata wakhe. U-Erica unovalo kuyisezala uza kuzisa ngaphezulu komfazi omnye, kodwa uAdonis uzimisele ukuthatha ithuba. Ngumngcipheko endifanele ndiwuthathe, uxelela ababukeli, kuba kuya kufuneka abuye ekugqibeleni. Ngutata wam, ngenxa kaThixo.
Esi sibini sithatha isifundo se-salsa emva kokumema umqeqeshi wokudanisa ekhayeni labo. Kuyavela ukuba bobabini bendalo, kwaye banexesha elimnandi lokudanisa. Ndiva ngathi uzama ngamandla ukuba andikholise, kwaye ndiyayithanda, uErica uxelela ababukeli ngoncumo.
Emva kwexesha, uAdonis ubiza utata wakhe ukuba ammemele kwisidlo sombulelo, kwaye uErica uneemvakalelo ezixubeneyo. Kodwa uzimisele ukulalanisa ukuze onwabe umyeni wakhe.
Ngombulelo, utata ka-Adonis uzisa umfazi wakhe, uBillie. Unceda uErica ekhitshini ngelixa amadoda ebopha iimoto ngaphandle. Kuya kuba ngcono, u-Erica uxelela uBillie malunga nobudlelwane bakhe no-Adonis, kodwa ndingumntu onomona ngokwenene, ke ndiziva ngathi andinakukwazi ukuphatha ingqalelo ka-Adonis kuye nabani na. UBillie uphendula ngokuthetha nge-polyamory, echaza ukuba sisithuthi sokujongana neemvakalelo ezingalunganga. Ucacisa ukuba amadoda anomdla ngokwendalo kwabanye abantu basetyhini, athe wafunda emva kokuba bekwimitshato emithathu. Yinto eyenzekayo endle, uyachaza. Kodwa u-Erica ngokucacileyo akayithengi.
Ngexesha lokutya kwabo, utata ka-Adonis noBillie baqala ukubala oomama abaninzi baka-Adonis, kodwa uErica uyachukumiseka xa umyeni wakhe ethetha ngokukhusela umfazi wakhe kunye nomtshato wabo.
URob noRochelle Brann: Ngexesha lokuthetha ngentliziyo ngentliziyo ebhedini, i Abantu abasandul 'ukutshata Babonakalisa ubudlelwane babo. Ndifanele ukuba yinto yakho yonke. Ndifanele ukuba yinkqubo yakho yenkxaso, uRob uxelela umfazi wakhe ngexesha lokuxolisa ngengxabano yabo. Aba babini benza, kwaye njengoko behleka kunye, uRob uthi, Masenze umntwana.
Njenge Abantu abasandul 'ukutshata Bapheka isidlo sombulelo sababini, uRochelle ulahlekile kusapho lwakhe. Kwimizamo yokulinganisa i-turkey, uRob ubamba inja yakhe ecaleni kwentaka ngokuthelekisa, esenza umzuzu ohlekisayo, ongalibalekiyo.
URochelle kamva ubiza umama wakhe ngengxoxo yevidiyo, kwaye isihloko sengxoxo ngutata kaRochelle. Akazange abe nolwalamano naye kwiminyaka engama-20, kodwa umama wakhe ukhuthaza intombi yakhe ukuba ithathe inyathelo lokuqala.
Umalume kaRochelle ubeka umnxeba phakathi kukaRochelle notata wakhe, kodwa akabizi xa kufanelekile. Emva kokumshiya ne-voicemail, uyambiza kwakhona, kwaye bobabini babelana ngengxoxo emnandi. Uyathemba ukuba unyanisekile xa emxelela ukuba ufuna bakhe ubudlelwane, kwaye uyonwabile ukuba intetho ihambe ngcono kunokuba bekulindelwe.
URob kunye noTara Radcliffe: Nangona uTara efuna ukubona usapho lwakhe ngombulelo, uRob uyala ukuya. Ufuna isidlo sendabuko saseMelika, hayi ukusasazeka okukhulu kokutya kwamaPersi. Imicimbi edlulileyo iyavela kwakhona, kodwa akukho macala aqhubayo.
UTara uya kutyelela abazali bakhe, ethatha umhlobo wakhe osenyongweni u-Tai kunye ne-buffer. Xa uTara exelela umama wakhe ukuba akazokuza ngombulelo, ucebisa ukuthetha noRob. UTara uyala isicelo sakhe, echaza ukuba uRob akayifumani, eshiya bobabini umama nentombi yakhe becaphukile. Uyazi ukuba abazali bakhe baziva umgama okhulayo phakathi kwabo.
Xa ifayile ye- Abantu abasandul 'ukutshata yiya kwindawo yokutyela ngesidlo sabo sokubulela, uTara akakho kumoya weholide. Ndikhumbula usapho lwam namhlanje; Ndinqwenela ukuba bendikunye nabo, uyavuma. Akukho nto injengokuba kunye nosapho.
URob uyakrakra ngenxa yokuba oodade ababini bakaTara bengakhange babonakale ngomtshato wabo, bevuma ukuba soze ayeke. Sinovakalelo olomeleleyo lomdlalo wosapho uya kuqhubeka de kwenziwe isivumelwano.
Intloko yokroba: Kwisiqendu se-10 kuFebruwari Abasanda kutshata: Unyaka wokuqala , URochelle undwendwela utata wakhe eNgilane. UBrandon unempilo eyoyikisayo, kwaye uAdonis noErica banokuba bethetha abantwana ngaphambi kokuba balindele. URob noTara banokuba kwenye indawo njengoko indawo yabo yokuhlambela iphantsi kohlaziyo.
Ikhekhe lomtshato liyathengiswa
indlela yokujonga ubungakanani bendandatho yam
iibhentshi zegumbi lokuhlamba
Ingoma yokuqala yomdaniso yomtshato
Imibala yeminyango yegaraji ngemibono